ဗစ်တိုးရီးယားအမှု - ရဲက တရားရုံးတင်တဲ့အထဲမှာ DNA အကြောင်း မပါဘူးလို့ဆို
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု - ရဲက တရားရုံးတင်တဲ့အထဲမှာ DNA အ...
4 ธ.ค. 2562 - 21:01 น.
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားရုံးကို အမှုတွဲတင်တဲ့အထဲမှာ DNA အကြောင်း မပါဘူးလို့ ဥပဒေ အရာရှိက မီဒီယာတွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သက်သေတွေကို စစ်တဲ့အခါ DNA ကို ကလေးရဲ့ဖခင်၊ အိမ်အနီးအနားကလူ၊ ကလေးနှစ်ယောက် စတဲ့ စစ်ဆေးထားမှုတွေကို တွေ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုက အသက်သုံးနှစ်မပြည့်သေးတဲ့ မူကြိုကျောင်းသူ လိင်စော်ကားခံရတယ်ဆိုတဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ၁၂ ကြိမ် မြောက်ရုံးချိန်း ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်မှာ ဥပဒေ အရာရှိက အခုလို ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ မိန်းမကိုယ်မှာ သုက်ပိုးတွေ့ရှိ
Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းရှေ့ အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့က စီစီတီဗီပုံရိပ်များ
ဒါ့အပြင် ရဲကတင်တဲ့ အမှုတွဲမှာ ဗစ်တိုးရီးယားကို စစ်ဆေးထားတဲ့ ဆေးစာပျောက်ဆုံးတဲ့ အကြောင်း မပါရှိဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
သူတို့ အနေနဲ့ ဆေးစာပျောက်တဲ့ အကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးက တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုသွားမှ သိရတယ်လို့လည်း ဥပဒေ အရာရှိက ပြောပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ system ပုံးထဲက အချက်အလက်တွေ ပြန်ရမရ ပညာရှင်တွေနဲ့ စစ်မယ်
စီစီတီဗီ Hard Disk ထဲက အချက်အလက်တွေ ပြန်ရမရ
ကျောင်းက သက်သေခံ ပစ္စည်း အဖြစ် စီစီတီဗီရဲ့ Hard Disk အဖြစ် တင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ system ပုံးထဲက အချက်အလက်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ ၄ ယောက်က ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်မှာ စစ်ဆေးမယ်လို့ ဥပဒေ အရာရှိက ပြောပါတယ်။
စီစီတီဗီက ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ သိမ်းထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ system ပုံးထဲက အချက်အလက်တွေ ပြန်ရမရကို ဒီလူတွေနဲ့ တရားရုံးမှာ စစ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလို စစ်ဆေးတာမှာ ပါဝင်မယ့်သူတွေက စီစီတီဗီနဲ့ ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ ရဲမှူး၊ အရင် တရားရုံးချိန်းမှာ လာရောက် စစ်ဆေးပေးတဲ့ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်၊ မြန်မာ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ ရန်ကုန်က စီစီတီဗီကုမ္ပဏီက လူတစ်ဦးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က Hard Disk ထဲက မှတ်တမ်း အချက်အလက်တွေ ပြန်ရမရ၊ ဘယ်လို လုပ်နိုင်မလဲ စတာတွေကို စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ မှတ်ချက်တွေကို တရားရုံးကို တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပညာရှင်တွေ စစ်ဆေးပြီးရင် သူတို့တွေ့ရှိချက်တွေကို သူတို့က အများပြည်သူကို ချပြခွင့်မရှိပါဘူး။
ဒီနေ့ ရုံးချိန်းမှာ ဘယ်သူတွေကို စစ်လဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ ရုံးချိန်းတုန်းက မပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းက ကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်၊ ဖယ်ရီကားပေါ်က ဆရာမနဲ့ ကျောင်းက ဆရာမ စုစုပေါင်း သုံးယောက်ကို စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်က သံသယတရားခံ ကိုအောင်ကြီးက လိင်အကြမ်းဖက် ကျူးလွန်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးလို့ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဖယ်ရီက ဆရာမကတော့ ဆရာမနှင်းနုက ဗစ်တိုးရီးယားကို ဂရုစိုက်လိုက်ဖို့ မှာလိုက်တဲ့အကြောင်း ထွက်ဆိုပါတယ်။
ကျောင်းက ဆရာမက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဆုသဲပိုင်ထွန်းကလည်း ကိုအောင်ကြီးက အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာ ကျောင်းကို ရောက်လာပေမဲ့ ဧည့်ခန်းမှာသာထိုင်တယ်၊ ကလေးတွေ ရှိတဲ့ အခန်းကို လုံးဝ ဝင်မလာဘူး၊ ကိုအောင်ကြီး ကျောင်းမှာ ရှိချိန်မှာလည်း ဆရာမတွေက ကလေးတွေနဲ့အတူ ရှိနေတယ်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၁၃ ကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်မှာ စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုံးချိန်းမှာ မူကြိုက ဆရာမ ဒေါ်နှင်းနု နဲ့ ကျောင်းက နောက်ထပ် ဆရာမ နှစ်ယောက် စုစုပေါင်း သုံးယောက် ကိုစစ်ဆေးမှာပါ။
อัลบั้มภาพ ဗစ်တိုးရီးယားအမှု - ရဲက တရားရုံးတင်တဲ့အထဲမှာ DNA အကြောင်း မပါဘူးလို့ဆို